Kedu nke ka mma Atkins ma ọ bụ keto? - Ihe Oriri
Isi > Ihe Oriri > Atkins diet vs keto - esi edozi
Kedu nke ka mma Atkins ma ọ bụ keto?
Chiefsnandiaha bu nri ndi nwere obere ume nke nwere ike irite uru nha, njikwa oria mamiri, na obi obi. Ihe dị iche ha bụ na ị jiri nwayọ mụbaa ihe oriri carb gịChiefs, mgbe ọ na-anọgide dị ala nandianri, na-ekwe ka ahụ gị nọrọ na yaketosisma gbaa ketones ọkụ.Jun 13, 2019
(obi ụtọ na-ada ụda) (ihe na-eme mkpọtụ) - Ihe na-eme na Jigsaw Health Crew, ọ bụ Thomas DeLauer, taa ana m ekwu maka ọdịiche dị n'etiti ketosis na Atkins gbanwere na ụfọdụ n'ime isiokwu m. Ya mere echere m na ọ zuru oke ikwu maka ezigbo nri ketogenic ọgwụgwọ dị ka ihe anyị na-amata dịka nri Atkins. Iji ghọta ihe dị mma maka ahụ ike gị, ọ bụghị naanị nsonaazụ ịchọ mma ị maara, a chọpụtaghị Ketosis naanị site na otu onye dinta onye kpebiri, 'Hey, Ọ bụrụ na anyị ewere carbs na ngalaba onye ọ bụla ga-abata' onye ọ bụla ga-adịkwa mma ma lee anya nke ukwuu 'jupụta na veins na ụdị ihe a niile.' Mba, ọ metụtara ọgwụgwọ.
Ọ metụtara ọgwụgwọ. N'ezie, ọ bụ ogologo oge gara aga mgbe Hippocrates n'ụzọ nkịtị 500 BC. Amalitere ide ihe banyere ibu ọnụ, nke nwere nnukwu nsogbu na akwụkwụ. Ndị mmadụ chere na ọ bụ sayensị niile a.
Mba, ọ na-alaghachi azụ. Ndi mmadu choputara na oburu na ha kwusi iri nri, oria ndia di iche ga aju. Mana n'ezie na ha enweghị teknụzụ ọgbara ọhụrụ iji mata ihe ọ bụ, yabụ ọ bụ rue ihe dịka 1921 ka otu dọkịta, Dr.
Galen chọpụtara na ketones bụ ihe jikọrọ ọnụ ma a bịa n'ịgwọ ọrịa. Ya mere ha malitere lere ihe anya wee sị, 'Ọ dị mma, ọ bụrụ na anyị buru ọnụ na ngwa ngwa.' bụ mmebi iwu na nzaghachi dị ịtụnanya, 'gịnị kpọmkwem ka ọ bụ na ibu ọnụ na-agwọ ọrịa akwụkwụ?' na ọgwụgwọ ụfọdụ n'ime ọrịa ndị ahụ? 'Ọ dị mma na ọ bụ ketones.
Mgbe ị na-ebu ọnụ, ị nọ n'ọnọdụ ketogenic. Kedu ihe ọ bụ? Ihe na-atọ ọchị bụ na e nwere ọtụtụ ndị dị iche iche na-ahapụ nri nri ketogenic, naanị ha hụrụ n'anya ịhapụ ya. Nanị ihe ha na-ekwu bụ na ọ jọgburu onwe ya nakwa na ọ ga-ewelite ogo gị cholesterol na ihe niile ị chọrọ, mana ha na-ebu ọnụ nke ọma.
Ọfọn, ihe na-adọrọ mmasị bụ na mgbe a bịara n'ihe ziri ezi, anyị na-agbasi mbọ ike maka otu ihe ahụ. Ihe niile anyị na-anwa ime na ketosis bụ ịkwalite ozu ketone nke ga-emekarị n'oge ibu ọnụ. Ya mere, ọ bụzị n’afọ 1924 ka nwoke ahụ akpọrọ Dr.
Wilder nke Mayo Clinic chọpụtara ezigbo nri nri ketogenic. Ugbu a, mgbe m kwuru eziokwu nri nri ketogenica, m na-ekwu nri nri ketogenic nke e ji agwọ akwụkwụ na nsogbu dị iche iche nwere nsogbu glucose. Enweghi ike iji glucose eme ihe.
N'ezie, ọ bụghị ruo 1924 ka etinyechara ya na sistemụ ma anyị nwere ike wepu data 1921 niile ma tinye ya na nri. Ya mere, ebee ka nke a na-abanye na ihe na-eme? Taa? See hụrụ, taa anyị hụrụ ụdị mmadụ niile nọ na nri nri, na abụ m onye na-akwalite ya, mana kedu ihe na-eme? See hụrụ, usoro nri keto mara mma dịka 4: 1 ruru site na abụba na protein. 3: 1 kachasị.
Gịnị bụ ihe a taa? Ọtụtụ ndị mmadụ na-eri ya 1: 1 ma ọ bụ 2: 1 ma ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ dị mma. Sayensị niile, ihe niile anyị maara banyere ketosis, metụtara 3: 1 ma ọ bụ 4: 1. Mana onweghị onye chọrọ ime nke ahụ.
See na-ahụ nri Atkins, ma ọ bụ ihe a na-akpọzi Mgbanwe Atkins Diet, dị ka 2: 1. Ọ dị irè? Kpamkpam, ọ ka dị irè na-enyere ahụ gị aka ịhazigharị onwe ya. Ma ị na-enweta uru nke ketone? Isi? Eleghị anya ọ bụghị.
Kedu ihe m bụ onye ofufe nke? Abụ m onye na-akwado ịkekọrịta ihe dị iche. Anọ m ebe a na-agba bọọlụ 3-1, echere m na anyị kwesịrị inwe abụba anyị elu, mana ọ bụghị nke ahụ na-atọ ndị mmadụ ụtọ, ndị mmadụ nwere ike ịbanye n'ime ọgịrịga ma ọ bụ akpịrị nku anya karịa nnukwu efere nke aki oyibo. Nke a bụ ebe ọdịiche dịkarịsịrị.
Ndị mmadụ anaghị aghọtacha ihe dị iche na nri ketogenic na Atkins gbanwere. Mana nke a bụ ihe ị nwere ike ịma. Ọ bụrụ na ị bụ nri nke oge a, ụdị ketosi nke oge a, enwere ezigbo ohere ị ga-eme nke ahụ na-eri protein ka anụ ahụ gị wee banye na gluconeogenesis wee kwụsị ketosis.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị naghị eji obere osisi keto ma ọ bụ mita ume gị tụọ ya, ọ dị mma? O nwere ike ịbụ na anyị ka na-apụ na ketosis karịa ka ị chere. Ya mere, anyị kwesịrị ịmalite ikwu okwu banyere nsogbu ọgwụgwọ na ihe nri nri ketogenic nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị nweta ya nke ọma mgbe a bịara n'ịgwọ ọrịa. Ugbu a, emehiela m, achọrọ m ikwu maka ihe ịchọ mma n'ihi na m ka chọrọ ikwu maka ngwakọta ahụ na otu esi aga ọrụ, mana ka anyị lelee ihe na-eme ma a bịa n'akụkụ ọgwụgwọ. nke Ihe na-aga.
A na-eji ketosis eme ọtụtụ ihe dị iche iche, mana mgbe ọ bịara n'ihe banyere ume dị iche iche, mgbe ahụ na-enweghị ike ịpụta ụdị ike ọ chọrọ na glucose. Ọ dị mma, anyị na-ekwu maka ụkọ pyruvate dehydrogenase. May nwere ike icheta na klaasị bayolọji gị nke okirikiri, ma ọ bụ okirikiri Krebs, ebe shuga na-abanye ma na-agafe okirikiri Krebs, na-ekepụta pyruvic acid wee mechaa ike.
Fọdụ na-enwe nsogbu ebe ha na-agaghị emeli ya. Nke a bụ ebe ketosis na-abata dị ka nnukwu isi iyi mmanụ. Ọ bụ n'ụzọ nkịtị mmanụ dị iche maka mitochondria iji mee ihe.
Ugbu a, anyị kwesịrị icheta na ketosis bụ maka ọrụ mitochondrial. Anyị na-anwa ịchọta ụzọ ọzọ ka mitochondria wee nwee ike ịgba mmanụ na-enweghị glucose. Ahụ gị enweghị ike ịme ụdị shuga dị mma, ọ gaghị enwe ike ịme ụdị ike sitere na glucose, yabụ ahụ ndị ketone na-arụ ọrụ.
Ma olee nsogbu ụfọdụ ndị a ma ama? Ihe dị ka ọrịa neurodegenerative dị ka Alzheimer's na Parkinson's. Kedu ka ihe a si arụ ọrụ? Ọfọn, ọ ka na-adabere na mitochondria. Ya mere, m na-aga ebe a, echela naanị na m na-eche maka usoro ọgwụgwọ nke ihe, n'ihi na m ga-aga otu isi na o nwere ihe ọ bụla metụtara mitochondria a.
N'ihe banyere ọrịa Parkinson, ebe ahụ anaghị enwe ike ịkwaga shuga nke ọma na mgbochi ụbụrụ ọbara, ọ ga-emecha bụrụ onye a maara na-aghọtahieghị site na ihe akpọrọ Complex I. Ihe mgbagwoju a m na-eduga n'eziokwu bụ na mitochondria enweghị ike na-arụ ọrụ nke ọma. Ya mere, ọ naghị ezipụ akara ngosi ziri ezi, ya mere nzaghachi dopamine anaghị arụ ọrụ, yabụ ị nwere ọrịa Parkinson, ọ bụrụ na ị nwere ketosis ị nwere ozu ketone nwere ike ịgafe mgbochi ụbụrụ ọbara ma rụọ ọrụ mitochondria.
Inye ndụ ọhụrụ nye ndị ọrịa nwere ọrịa Parkinson site n'inwekwu ume iji nweta nri Diet ga-agwa m ugbu a, 'Ọ dị mma, nke a dị mma.' Ọ dị mma maka ndị nwere nsogbu. 'Ọ bụ ụzọ ọzọ a na-esi echekwa mmanụ.' Ehe, m ga - arụ ụka na mmiri ozuzo enwetala anyị ebe anyị ga - aga? Naanị n'ihi na anyị achọpụtala ụzọ dị iche iche esi eri mmanụ na mmanụ dị iche apụtaghị na ọ bụghị nke ziri ezi ma ọ bụ nke na-ezighi ezi dị.
Mgbe anyị nwere ohere ịgbanwee na ihu, ọ dị ka ọ bụ n'ezie ọmarịcha, ụzọ akụ na ụba iji rụọ ọrụ. Ha na-echebe mitochondria. You'regaghị akpọ akụkụ glucose ọkụ, ị gaghị agba abụba nke ihe ọkụ, yabụ ị nwere ike ịgafe usoro nke usoro ọgwụgwọ ketogenicity ebe ị na-agwọ ahụ gị ma nye mitochondria ezumike site rụọ ọrụ ọzọ nke ya, Agbanyeghị, m digress.
Mana ka anyị kwukwa maka ọrịa kansa nke abụọ, makana ọrịa kansa bụ nnukwu okwu. Ketosis na cancer bụ isiokwu nyocha nke ọma ugbu a. Ihe niile metụtara eziokwu ahụ bụ na mkpụrụ ndụ kansa dị iche iche.
Emeela m ọtụtụ nnyocha onwe onye na ụwa nke kansa. Ndị maara m nke ọma maara na ọrịa nna m nwụsịrị na Febụwarị m na-amụ nyocha kansa na ketosis ogologo oge. N'ezie, ụfọdụ ndị dọkịta na UC Davis m gwara okwu mgbe nna m nọ na ọgwụgwọ bụ nnukwu ndị na-akwado iji usoro ọgwụgwọ ketogenị dị ka mgbakwunye na chemotherapy.
Ọ bụghị naanị dị ka ọgwụgwọ, mana dị ka mgbakwunye iji kwado ọgwụ. Ọfọn, lee ihe kpatara ya. Mkpụrụ ndụ cancer dị iche na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ na ahụ, anyị maara nke ahụ.
Ma ha dị iche na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ n’ihe gbasara otu ha si amịkọrọ glucose. Have nwere 10 ugboro ole ndị na-anabata insulin na-anabata onwe ha. Kedu ihe nke a pụtara? Ọ pụtara na mgbe ị na-eri nri ndị na-enye ike, ị ga-ejikarị okpukpu iri jiri carbohydrates ndị ahụ karịa sel ndị ọzọ na ahụ gị.
Nke ahụ pụtara na ha ga-eto ma jiri shuga na-eto nke ọma. Ha bụkwa ụdị ihe ọchị, n'ihi na ha enweghị ike ịmị abụba nke ọma. Mitochondria gị mebiri.
Cheta, mkpụrụ ndụ cancer bụ mkpụrụ ndụ na-adịghị mma, ha adịghị ka sel ndị nkịtị. Ha anaghị arụ ọrụ dịka mkpụrụ ndụ ndị ọzọ n’ahụ anyị; ha enweghị Ni Ni system ma gafere ụkpụrụ nduzi na usoro ọrụ ọrụ. Ha na-aga site na obere ihe ntakịrị ihe ntakịrị egwu ha na mitochondria na-emebi.
Cannot nweghị ike iji abụba. Yabụ ọ bụrụ na itinye ọtụtụ abụba n'ime ahụ gị ma ọ bụghị ọtụtụ ịmaghị otu esi eji nke ahụ wee bido agụụ. Agbanyeghị, ana m agabiga oke usoro ọgwụgwọ.
Isi okwu ya bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịga nri nri ketogenji, ana m agba gị ume ka ị chọpụta ihe kpatara ị ji eme ya. Kedu otu ihe a si metụta nri Atkins? Ma olee otu o si metụta ahụ na nri nke ezubere maka gị? Anaghị m ekwu na n'ime ha dị njọ. Mana ana m ekwusi ike na ị na-ele etu nri nri ketogenji si arụ ọrụ na ahụ gị n'ihi na nke ahụ bụ ezigbo ihe anyị na-achọ mgbe anyị nọ na nri nri.
Ihe mejupụtara ahụ ga-agbanwe, mana ọ bụrụ na ị nọgidesie ike na Atkins nke gbanwere 1: 1 ma ọ bụ 2: 1, ị nwere ike ị gaghị enwe mmetụta dị mma, nke ahụ metụtara naanị iji ketones eme ihe mgbe ọ bụla iji ya dị ka mmanụ ọkụ isi mmalite. Na-eji ha oge ụfọdụ mgbe ọ bara uru n'ahụ gị, ma ọ bụrụ na ahụ gị echee na ọ ka chọrọ glucose, ọ ga-agbanwe protein ndị ahụ na-aba ụba na glucose ma ọ bụ na ị gaghị enwe abụba zuru oke iji mee ka ahụ ketone kwalite n'ezie. yabụ ị ga - ebido imebi akwara nke gị ọtụtụ mmejọ na Atkins gbanwere ma achọghị m ka ị chee na nri Atkins bụ ezigbo nri ketogenic. E nwere ọdịiche dị iche.
Ugbu a, m ga - abụ onye mbụ na - ekwu na ọtụtụ ndị nọ ebe ahụ nwere ike ịdị na - eme ụdị n'ụdị Atkins a gbanwere ma ọ bụ ụdị Atkins na mbụ. Ọ ka na-arụ ọrụ. Ka ga-ahụ mgbanwe ụfọdụ na ahụ gị site na iweda ogo insulin gị nke ọma, nke ahụ bụ n'ezie ihe dị mma.
Enwere ọtụtụ ihe ịtụnanya nke a na - ekwu na ọ bụrụ obere insulin. Ya mere, anaghị m ekwu na ọ dị njọ, mana m na-ekwu, tupu ị tinye akpa nri ketogenica, ghọta sayensị, ghọta oke ụzọ, ghọta ụfọdụ nyocha nke Dr. Dom D'Agostino mere ma bipụtara ya na ịntanetị na pọdkastị na gburugburu ụwa ka anyị gụọ.
Abụ m nnukwu onye ahịa nke ọdịnaya ya ma echere m na ọ nwere echiche ziri ezi n'ezie n'ihi na na njedebe nke ụbọchị anyị ga-ejide n'aka na anyị bụ ndị na-akwado anyị maka ahụike anyị ma ọ bụrụ na nri ketogenic ga-abụ ihe ga-ekwe omume belata mbufụt ma nwee mmetụta neuroprotective na ahụ anyị. Echere m na ọ dị mma maka onye ọ bụla na-agba ịnyịnya ígwè ma pụọ ​​na ketosis ruo ogologo oge, dị ka ọnwa atọ na ọnwa isii. O bu uzo ibi ndu ichoro ime ruo mgbe ebighi ebi? Nke ahụ ga-adị gị ma ọ bụrụ na nri a masịrị gị.
Na ngwụsị nke ụbọchị m chọrọ ka ị mata ọdịiche dị n'etiti Atkins gbanwere agbanwe na nri ketogenica echefula ngwa ngwa. N'ihi na nke ahụ bụ ihe ọ bụ ihe niile banyere na njedebe nke ụbọchị. Anyị na-ebu ọnụ nke ọma, anyị na-anwa i toomi ibu ọnụ.
Yabụ n'ebe ahụ ị nwere ya, ndị ọrụ Jigsaw agbachi ya ebe a na Jigsaw Health, bụ ebe oria gị maka ihe ọ bụla metụtara mineral, ihe niile metụtara ahụike, yana ụlọ ahịa nkwụsị gị maka magnesium kacha mma n'ụwa. Ya mere debe ya kpọchie ebe a. Lee gị n'isiokwu na-esonụ.
Kedu nke kachasị mma ma ọ bụ keto?
Ya mere, aobere carbnri yiri ka ammanhọrọ maka ọtụtụ mmadụ. Nke ahụ kwuru, ọ dị mkpa ịkpọtụrụ onye na-eweta ahụike gị tupu ịmalite nri ọ bụla iji belata ihe egwu gị. Ezie na nri abụọ amachicarbska iche iche degrees, nandianri bụ ihe mgbochi karị.Ọnwa Atọ 31, 2019
N'isiokwu a, anyị na-atụle ọdịiche dị n'etiti nri ketogenic na nri obere obere carb ma kwuo maka nke ka gị mma. Ndewonu ndi nwem na ndi nwem. Enwere m dr Zyrowski ma nabata ọwa mmiri ahụ.
Ugbu a ọ bụrụ na ị bụ ọwa ọhụrụ na ọ bụ ihe ọ toụ ịnwe gị ebe a. Jide n'aka na ịdenye aha, pịa ọkwa mgbịrịgba ahụ, ma sonyere obodo ngosi anyị ka m nwee ike inyere gị aka melite ahụike na ndụ gị. N'isiokwu a, anyị na-ekwu maka keto vesos obere carb diets.
Ugbu a enwere ihe dị iche. Ọtụtụ ndị na-eche na ha bụ otu ihe ahụ. Enwere ihe di iche.
Aga m akọwara gị ihe dị iche wee kọwaa otu m si eji ụlọọgwụ a enyere ndị mmadụ aka ịgbanwe ahụ ike ha. O nwere ike iju ọtụtụ ndị anya na nghọta m banyere ụdị nri abụọ a dị iche iche yana etu m si eji ha eme ihe na ihe m na-eso, mana ha abụọ bụ ezigbo nri. Ka anyị dive n'ime.
Ugbu a ọ bụrụ na anyị eleba anya na nri ketogenic, ọ pụtara na ị ga-efunahụ gram 50 ma ọ bụ obere carbohydrates. Ọtụtụ mmadụ n'ezie nwere n'etiti 25 na 35 grams nke carbohydrates kwa ụbọchị. Ọ dị mma, ihe kachasị na nri ketogenic bụ na ọ bụ nri enwere ike ịgụta ọnụ, nke ahụ pụtakwara na ị ga-enwe ike ịlele ketones ọbara gị ma ọ bụrụ na ị na-agbaso nri ketogenic nke ọma, ị ga-ahụ onwe gị na steeti ketosis.
Nwere ike ịlele nke a site n'eziokwu na ị nwere ike tụọ nri iji mara ma ọ bụrụ na ị na-agbaso ya nke ọma dị ike. Ọfọn, nri ketogenic bụ nnukwu abụba, protein na-adịchaghị mma, obere nri carbohydrate. Nri ketogenic dị ukwuu.
O nyerela ọtụtụ ndị aka ịgbanwe ahụ ike ha ma yabụ nri anyị hụrụ n'anya ebe a n'ezie. Ihe na-esote bụ nri obere-carb. Ugbu a ọ bụrụ na anyị eleba anya na obere nri carb, ọ bụ ezigbo nri.
Ugbu a, nri obere obere carb enweghị usoro akọwapụtara nke ọ ga-ada. Ya mere aga m agwa gị otu m siri mee obere nri nri carb. Echere m ya dị ka gram 100 ma ọ bụ obere carbs.
Na nri ketogenic, ị hụrụ otu narị gram nke carbs dị ka, chi m, nke ahụ bụ ọtụtụ carbs. Mana ikwesiri ighota na onye o bula kariri gram 300 ma obu karia ubochi nke gram 300 nke carbohydrates, ihe na adighi nma nke oma na otutu oge, ma iga 100 gram nke carbohydrates di nma dika nkpuru oma nke bara ezigbo uru mgbe ahu nke na agbanwe agbanwe. maka ya. Ya mere buru n'uche nke ahụ.
Ugbu a, n'ihe oriri na-adịchaghị ala, anyị na-ewepụkwa nri esichara, ihe ọ drinksụ drinksụ nwere shuga na ọka. Nke a bụ nri ebe anyị na-eri ezigbo, ogo dị elu, nri niile ma tụfuo usoro mkpofu ahụ niile ga-agbanwe ọtụtụ mmadụ. Nri dị oke abụba, na-edozi ahụ na protein, obere carbohydrates, dị ka nri ketogenic.
Ugbu a ọ bụ nri kwa ebe anyị ga-elekwasị anya na iri nri dị mma, mma, ezigbo mma. Ikike itinyekwu carbohydrates na nri gị apụtaghị na anyị bụ achịcha ọcha yana ọtụtụ nri ratụ ratụ. Nke ahụ pụtara na anyị na-agbanwe na nnukwu carbohydrates dị elu.
Ma nke ahụ bụ otu n'ime ihe ndị mere m ji ahụ nri obere obere carb n'anya n'ihi na ọ na-enye gị ohere iri ọtụtụ nnukwu carbohydrates dị mma maka ahụike gị, ọ dịghịkwa njọ na ị ga-eri poteto ụtọ na mkpụrụ osisi dị iche iche ihe mmadụ hụrụ n'anya na obere nri carb na-enye ohere mgbanwe karịa na mpaghara ndị a. Echekwara m na ọ ga-adigide, ogologo oge. Ọ ga-abụ nri ka mma ịgbaso.
Site na echiche ahụike, enwere m ike ịgwa gị na m na-arụ ọrụ ọtụtụ mmadụ kwa izu. N'ikpeazụ, achọtara m ebe ndị mmadụ na-alụ ọgụ na ebe ndị mmadụ nwere ike ịme ihe ụfọdụ na-aga. Ndị mmadụ, maka ọtụtụ akụkụ, anaghị agbaso nri ketogenic nke ọma.
N'ọtụtụ ọnọdụ ndị mmadụ na-agbaso nri nri ketogenic ruo oge ụfọdụ wee daa n'ụgbọ okporo ígwè kpamkpam n'ihi na ha gbalịsiri ike, ọ dị anya na mpaghara nkasi obi ha, mgbe ahụ ha ga-eri nri dị oke egwu. . Tọn nke nri ratụ ratụ, ọtụtụ nri esichara, ha na-ada n’ụgbọ okporo ígwè. Yabụ nri obere obere carb nwere ezi uche n'otu ebe, n'etiti.
Ugbu a, ka m gwa gị otu m si eji nri ketogenica. Otu n'ime ihe ndị m hụrụ n'anya banyere nri ketogeniz ọzọ bụ na enwere ike ịgụta ọnụ ma ị nwere ike ịhụ nsonaazụ ngwa ngwa mgbe ị na-eche nsogbu dị iche iche ihu. Ya mere, lee ụfọdụ n'ime nsogbu dị iche iche m na-achọ ịhụ ma ọ bụrụ na mmadụ ga-abụ ezigbo nwa akwukwo maka nri ketogenic.
Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ibu abụba na mbụ, ọ nweghị ụzọ dị ngwa iji gbaa abụba ọkụ n'ihi na nri ketogenic ị nọ n'ọnọdụ ketosis, ị na-ewepụ ụlọ ahịa abụba maka ume, ị na-ere ọkụ ngwa ngwa. Ọ dị mma maka nke ahụ. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ idalata ngwa ngwa, nri ketogenic ga-abụ ezigbo azịza; onye nwere ọbara mgbali elu, ndị mmadụ na-enwe ezighi ezi hormonal.
Ọtụtụ ndị nwere nsogbu ahụ hormonal, ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke, na-enwekarị nsogbu na ya. Ya mere, ịgbaso usoro nri ketogenic ga-enyere aka ịmepụta nguzozi ahụ. Ọgwụ ike ọgwụgwụ - ndị na - enweghị ike ịla akwa ụra n'ụtụtụ n'ihi na ike gwụrụ ha.
Ndị mmadụ na-agbari n'ehihie. Nsogbu buru ibu nye ọtụtụ ndị taa. Ihe ha na - eme n'ihi ya bụ na ha na - abanye ma kpalite ahụ ha site n'ịmanyekwu caffeine.
M gwara onye na-a consumedụ ihe dị ka gramfe gram atọ na 400 lita ụbọchị kafe. Nke ahụ dị ukwuu. Ya mere, ha na-eji naanị caffeine na shuga akwali ahụ ha.
Ọ bụ ya mere ọkụ ji agba ọtụtụ mmadụ. Na-esote, nkwụsị nkwụsị ọnwụ. Nke a bụ nnukwu nsogbu.
Ọtụtụ ndị na-anwa ịdalata, ha na-eri ihe ha chere dị mma, nri ahụike. Ha na-emega ahụ́ ma ha enweghị ike imegharị ahụ́. Ọnwụ ibu bụ ezigbo nsogbu, ọ bụ nsogbu hormonal metabolic, ọ bụkwa nsogbu nsogbu na-afụ ụfụ ebe ndị na-anabata cell na-agba ọkụ ma ha anaghị anụ akara ngosi ziri ezi.
Ya mere, nke a bụ ebe nri ketogenic dịkwa irè. Ọrịa na-adịghị ala ala - ihe mgbu na ahụ gị niile, ihe mgbu na nkwonkwo gị, ihe ndị dị ka fibromyalgia, ọbara shuga, na enweghị insulin. Nke a bụ nnukwu nsogbu nye ọtụtụ mmadụ, ọtụtụ ndị nọ nso ọkwa prediabet a ebe ha nọ na nso ịdaba n’ọnọdụ shuga nke adịghị mma.
esi gbapụta a wheelie na igwe kwụ otu ebe
Ya mere, mgbe ị gbasoro nri nri ketogenic, ọ na-ebelata shuga shuga, na-agbada ọkwa insulin, na-eme ka ahụ nwee ike ịgwọ, ịdị arọ na-ebelata, mbufụt na-agbadata, homonụ metabolic dị iche iche na-eme ka ọ kwụsie ike, ndị mmadụ na-echekwa nke ọma. You gaghị ero ụra ma ị gaghị enweta akpata oyi. Di ghaghi iju anya ma oburu na i rie nri.
Ya mere, ha na-eche ọtụtụ mma. Ihe na-esote bụ ọrịa na-adịghị mma. Nke a bụ ebe nri ketogenic bụ kpakpando zuru oke.
Ọ bụrụ na ọ dịtụla onye nwere ya? ọnọdụ ụbụrụ dị iche iche ma ọ bụ onye na-arịa ọrịa ebe ha nwere ọtụtụ njide, nri ketogenic bụ nri mgbanwe dị otú a maka ndị a. Mụ na ọtụtụ ndị nwere nsogbu ndị a na nri nri ketogenic, ka m gwa gị na ọ na-agbanwe ndụ. Nke ahụ bụ otu n’ime ihe ndị mara mma banyere ya.
Ihe na-esote bụ ọrịa autoimmune. Ya mere achọpụtara m na ọtụtụ ndị na-echebara ụdị nri dị iche iche na gburugburu ha echiche na nri ketogenic na ihe ndị ọzọ. Na mberede ihe niile agabigala, nke dị ịtụnanya n'ezie.
Ọ dịka anyị na-anọdụ ala ebe ahụ na-anwa ijikwa nri ha na ịpụ ụfọdụ nri, na mgbe nri nri ketogenic gasịrị ha kwụsịrị ịzaghachi ma kwụsị ịzaghachi gburugburu ha gburugburu ebe ha na-amụrụ ụra mgbe niile. Yabụ naanị na ọ na - enyere gị aka ịnata sistemụ ọgụ gị n ’ọnọdụ zuru oke. Mgbe ọtụtụ mmadụ nọ ebe ahụ taa, usoro ahụ ha ji alụso ọrịa ọgụ na-aga n'elu ụlọ na nzaghachi nke ihe niile.
Nri ketogenic na-enyere aka idozi usoro ahụ ji arụ ọrụ ma dịkwa ike nke ukwuu ebe ahụ. Ya mere, ihe m masịrị iji nri ketogenic na-eji ya eme ihe. Onwe m, aga m eme ya otu ọnwa, ọnwa abụọ n'otu oge, wee laghachi na nri obere carb.
Mgbe mụ na ndị mmadụ na - arụ ọrụ n’ọkwa ụlọ ọgwụ, ihe m ga - eme bụ ka anyị chọọ ya iji nweta nsonaazụ ụfọdụ. Ka anyi mee nri nri ketogeniki maka oge na ihe ndi ozo. Ozugbo anyị nwetara nsonaazụ ndị a na ebe anyị chọrọ ịnọ, ka anyị gaa na nri dị mma, ahụike, obere-carb.
Yabụ, nri a na-eri obere obere carb bụkwa ezigbo ebe, nri nri ketogenic bụ nnukwu ebe ị ga-eme ihe kwesiri gị. Echeghị m na nri nri ketogenic bụ ezigbo nri maka ogologo oge nkwado dịka ọtụtụ mmadụ si n'ụgbọ ahụ daa. Ma obere nri carbohydrate dị ezigbo mkpa ịtụle.
Na mgbe ị jikọtara nke a na ibu ọnụ oge ọ bụla, ị ga-ahụ nsonaazụ dị egwu, m ga-etinye njikọ na edemede na-ebu ọnụ nke m mepụtara nke ga-akụziri gị ihe niile ị nwere ike ime banyere ibu ọnụ oge, otu esi eme ya, otu esi amalite ya, na otu esi ime ya right. Ya mere lelee ya n’elu, ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko dee ya na ngalaba nke dị n’okpuru. Nye edemede a mkpịsị aka ukwu ma soro ndị enyi gị kesaa ya ka ha nwee ike ịmata ọdịiche dị n'etiti obere carb, keto yana m iji ya na ọkwa ụlọ ọgwụ.
Jide n'aka na ịdenye aha na ọwa m, m ga-ahụ ya n'anya ma hụ gị Lelee isiokwu m ndị ọzọ gbasara otu esi eme ka ahụike gị dịkwuo mma, lee gị n'isiokwu na-esonụ.
Atkins ọ bụ ihe mkpuchi?
Ihe ọzọ di iche bu nandiaemmepe na aru nke anakpo ketosis n'oge nile nke nri, ebe ketosis na aru oru n’oge obula n’ime otu na dika odi abuo.Chiefs. GbanyeChiefs, ị mechara weghachite carbs, mana nandia, carbs na-ejedebe mgbe niile.Jun 18, 2018
Nri Atkins ọ dị mma?
Fọdụ ndị ọkachamara ahụike kwenyere na iri oke abụba na protein sitere na isi anụmanụ, dị ka enyere yaNri Atkins, nwere ike ibuwanye gị n'ihe egwu nke ọrịa obi ma ọ bụ ọrịa kansa ụfọdụ.
Do na-efunahụ karịa na keto ma ọ bụ Atkins?
N'ime oge niile a na-amụ ihe, ndị nọ n'ìgwè abụọ ahụatụfuru iheabụba abụba karịa abụba free uka. Ha LDL cholesterol etojumereagbanweghi, Otú ọ dị. Ndị nọ nandiaotu nriefula karịa ibu,Ọzọmmebi dị ịrịba ama na ọkwa triglyceride, ma nweenke ka eluHDL cholesterol etoju.Abụọ 12, 2019
Unyi ketoa na-akpọkwa ya umengwụndia, dị ka ọ na-enye ohere maka nri dị ukwuu na nke nri juru. Ọ na-ewu ewu n'etiti ndị chọrọ inwetaketosisna-enweghị nọrọ ọtụtụ oge prepping ọchandianri.Ọnwa iri 17, 2019
Nwere ike idalata na carbs 50 otu ụbọchị?
Mgbe ị na-eri ihe na-erughịiri isegrams kwaụbọchị, ahụ ga-abanye na ketosis, na-enye ume maka ụbụrụ site na ihe a na-akpọ ozu ketone. Nke a nwere ike belata agụụ na-akpata yagịkahapụ ibu ibuakpaghị aka.Carbs ị nwere ikeeri gụnyere: ọtụtụ alakabuakwụkwọ nri.Abụọ 2, 2020
Ọ na-eme ka ndụ gị dị mkpụmkpụ?
Oriri nri ndị nwere obere carbohydrates na abụba anụmanụ — dị kandiana Paleo — nwere ikemee mkpụmkpụihe onyeoge ndụsite na afọ anọ, dị kakaọhụrụ ọmụmụ bipụtaraIheAhụike ọha na eze Lancet.Ọgọst 23, 2018
Ego ole ka ị nwere ike ịnweta ụbọchị na nri Atkins?
Na-eri naanị gram 20 nke NetCarbs kwa ụbọchị. Nke ahụ dị ntakịrị karịa ndụmọdụ FDA nke 300 gramscarbohydrates kwa ụbọchị. Ebumnuche nke oge 1 bụ ime ka ahụ gị nwee ike ire abụba. Ma n'ihi na ị ga-ebuwanye ibu karịa n'oge a, ezubere ya iji kpalie gị ịrapara na yanri.
Popcorn ọ dị mma na keto?
Ọka agbara agbanwere ike mfe dabara n'ime andianri na kwa ụbọchị ịgba nke 50 grams nke net carbs na pụrụ ọbụna esịne ke ọzọ ekwe nsụgharị nkendianri. Ghara ikwu, ma ọ bụrụ na ị na-eso andianri iji felata,Ọka agbara agbanaanị nwere calorie 90 kwa otu.Ọnwa Ise 19, 2019